Izindleko Zokuhlolwa Kwewebhusayithi | Martech Zone
Izindleko Zokuhlolwa Kwewebhusayithi
ULwesithathu, April 4, 2012 ULwesibili, April 3, 2012 Douglas Karr
I-Monetate ibeke i-infographic efundisayo ngalokho okufanele ucabange ngakho nokuthi ungazithethelela kanjani izindleko zethuluzi lokuhlola iwebhusayithi. Ukubukeka okuphelele kwezinselelo, izindleko, umthelela, izindleko eziqondile, izindleko ezingaqondile namathuba okuhlinzekwa ukuhlolwa kwewebhusayithi.
Isilinganiso semali esiseduze sekhulu leminyaka esaziwa njenge-Total Cost of Ownership (TC)) singasiza ekunqumeni izindleko eziqondile nezingaqondile zokuthenga. Yamukelwe nguGartner ukusiza ukukala izindleko zangempela zokutshalwa kwemali kwesoftware noma kwehardware ngokuhamba kwesikhathi, izinkampani kufanele zibheke i-TCO lapho zinquma ukuthi yiliphi ithuluzi lokuhlola iwebhusayithi elizolisebenzisa.
Ngiwazisa kakhulu umugqa waphansi: Ithuluzi kungenzeka lishibhile, noma likhululeke, kepha isikhathi sakho nabantu abekho. Sibona abantu abaningi abangeke batshale imali kumathuluzi… kepha ungalokothi usebenzise la mahhala okufanele bawenze.
Tags: izindleko zokuhlolwa kwewebhusayithiimalibuyela kutshalomaliRIOtestinginani lezindleko zobunikaziukuhlolwa kwewebhusayithi
I-Anatomy Ye-Going Viral
Ngo-Apr 4, i-2012 ku-2: i-12 PM
UDouglas, njengenjwayelo… ngiyabonga ngokuthumela! Hlala ubheke i-infographic yethu elandelayo ku-Experience Experience. Kufanele kube okuhle!